Isu takaedza iyo itsva Aukey Wireless In-Ear Mahedhifoni [KUDZIDZA] | Gadget nhau
Nyika yeasina waya mahedhifoni ari kuwedzera. Apple inogona kuva nemhosva yeiyi nyowani maitiro, uye isu tinoona vakawanda uye vagadziri vachipinda pane bandwagon yeasina waya mahedhifoni ane AirPods dhizaini, asi zvakafanira here kuteedzera dhizaini yeakakurumbira mahedhifoni evakomana pane iro bhuroka? Nhasi tinokuunzira imwe yemhando yepamusoro uye ine hupfumi, nhasi tinokuunzira iyo Aukey nyowani mu-nzeve Wireless mahedhifoni. Ramba uchiverenga kuti isu tinokupa iwe hwese ruzivo rweaya mahedhifoni matsva.
Akanga achitaura nezve AirPods uye mahedhifoni anoteedzera dhizaini yake. Mune ino kesi iyo nyowani Aukey isina waya mukati-nzeve mahedhifoni, iwo ari-munzeve mahedhifoni ine dhizaini dhizaini. Chinhu chakanakisa pamusoro peaya mahedhifoni ndechekuti ivowo kukwanisa kuona kana isu takapfeka ivo kana kwete, chimwe chinhu chisingawanzo kuitika nemamwe mahedhifoni atakaedza. Chinhu chakanyatso gadzikana sezvo chichatanga kana kumbomisa mimhanzi patinovaisa kana kuibvisa.
Aukey's wireless in-nzeve mahedhifoni madiki kwazvo, asi izvo hazvireve kuti kune matambudziko nezwi. A Inzwi rinonakidza rakasimba zvekuti pane imwe nguva inogona kunge iri pasi-mabhasi, chimwe chinhu chisingafanire kuve chakashata nekuti vashandisi vazhinji vateveri veyakasimba bass mimhanzi. Iva kudzima ruzha kudzima nekuda kweayo ari-munzeve zvisikwa, chimwe chinhu chinoonekwa asi ichowo hachi svike padanho rekudzima ruzha kudzima, asi hongu, chinoita basa rayo pasina matambudziko.
Kana tikataura nezvemadhiramu, ini ndinokuudza izvozvo Aukey's in-ear wireless mahedhifoni ane kuzvitonga kuzhinji, kusvika pasina matambudziko pa Maawa makumi maviri nemana ekutamba pasina kupfuura kuchaja kesi, uye neizvi unogona kuwana kuzvimiririra padyo ne Maawa makumi maviri nemana ekutamba mushure mematareji akateedzana iyo iwe yaunopa kune mahedhifoni. Chimwe chinhu chinokwana zvakakwana tichifunga kuti ese mahedhifoni akafanana anofamba neese kuzvitonga.
Sezvauri kuona mumifananidzo yapfuura, iyo yekuchaja kesi inotiyeuchidza nezve AirPods Pro kesi, kunyange ane magineti kuitira kuti kana tichiisa mahedhifoni mune iyo kesi tirege kuarasa munzira, uye kuvharwa kwenyaya zvakare kune magineti kuitira kuti isavhure usingazvizive, uye kuti tikanganwe nezvekufambisa zvikamu zvinogona kudzikira.
Mhosva yekuchaja, iyo ine aya asina waya mukati-nzeve mahedhifoni kubva kuAukey, iyo inobvumira isina waya kuchaja (kuwedzera kune USB-C port), saka kana iwe uine base yekuchaja kune yako smartphone kumba, kana kunyangwe uine smartphone iyo inobvumidza kudzosera kuchaja, iwe unogona kutora mukana wesimba rewadhi isina kuchaja iyo iri mufashoni.
Asi hazvisi zvese zvine mutsindo munyika yehedhifoni, Aukey's in-ear wireless mahedhifoni akasununguka hongu, kunyangwe zvese zvinoenderana nezvinodiwa nemumwe nemumwe. Mubhokisi rezvigadzirwa tichawana matatu maviri mapedhi kuitira kuti tigowana iyo inokodzera nzeve dzedu, kana iwe ukawana yako hauzove nedambudziko. Ichi chinhu chakakosha kunyanya kana zvasvika pakuita mitambo navo sezvo izvi zvichizovatadzisa kuwa. Uye hongu ivo vari ziya uye kuputika kusagadzikana.
ari Aukey mu-nzeve isina waya mahedhifoni anobata-anodzorwa, chimwe chinhu chiri mukushandisa chinoshanda chaizvo. Zvichienderana nekubata kwatinopa kune chero eiri mahedhifoni atinogona imbomira kana kutanga mimhanzi, tora kana kusungirira mafoni, kana kutokoka waunofarira chaiye mubatsiri. Pamberi, zviri pachena, isu tinofanirwa kuzvibatanidza (kuburikidza neBluetooth 5) neyedu mudziyo, mumayedzo andakaita ini handina kana dambudziko neiyi nzira kusvika ubatanidze pamwe neMac, PC, iPhone, uye Android. Iwe unogona kutove nayo pane akati wandei michina uye shanduka zvinoenderana nezvaunoda.
Chinhu chakanyanya kukosha: mutengo, uye ndiwo chaiwo mutengo weaaya mahedhifoni, pamwe nehunhu hwavo, izvo zvinoita kuti idzi Aukey mu-nzeve dzisina waya dzenhare sarudzo yekufunga kana tiri kutsvaga mahedhifoni asina waya. Unogona enda kuAmazon pamutengo we € 35,99, saka kana iwe uchida chimwe chinhu chakanaka, chakanaka, uye chakachipa, usazeze uye Hapana zvigadzirwa zvakawanikwa..
Yakazara nzira kuchinyorwa: Gadget nhau » General » Isu takaedza Aukey's new In-In-Ear mahedhifoni.